Ị nọ ebe a: Home / Archives maka gelies ephemeral
Na-ebute Mgbapu na Mkpụrụ nke Ahịhịa na Osisi
United States - Ọ nụtụla okwu gullies? Na m ikpe mgbe! N'ebe a naanị bụrụ: nchịkọta bụ obere ọwa a na-egbutu na mmiri site na mmiri na-agba ọsọ mgbe mmiri ozuzo dị ogologo. Ha na-eme ka mmiri, ọtụtụ n'ime ya! Ozi ọma ahụ bụ na ọ nwere ike idozi na ngwọta dị mfe. Lee ụfọdụ n'ime ha!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Nsogbu Erosion Tagged With: ezumike ephemeral, ahihia, osisi